कांग्रेस महाधिवेशन : संस्थापनको तीन गुट, देउवालाई चिठ्ठा ?
महाधिवेशनको मुखैमा पनि उम्मेद्धवारी चयनमा देखिएको भद्रगोल र नीतिगत तथा कार्यक्रमिक तहमा थाती रहेको विवादका कारण आसन्न १३ औं कांग्रेस महाधिवेशन सो पार्टीलाई पुर्नजीवन दिने कुम्भमेला भन्दा ज्यादा आन्तरिक बिवाद सतहमा ल्याउने मेलो जस्तो देखिदैछ । पार्टीलाई भावनात्मक रुपमा एकतावद्ध बनाउने नेताहरुको उदघोष फगत गफका रुपमा सीमित हुदै गएको छ भने नेतृत्वमा देखिएको तानातान र हानाथापले पार्टीको आन्तरिक गुटफुटलाई मात्रै मलजल गरिरहेको छ ।
सभापतिमा चारः पहिलो चरणमा नहोला त सबैको हार ?
आन्तरिक समीकरणमा कुनै आकस्मिक परिवर्तन भएन भने साविकका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, नेतृ सुजाता कोईराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी हुने लगभग पक्का भएको छ । सुजाता बाहेक अरुले उम्मेद्धवारीको औपचारिक घोषणा गरिनसकेको भए पनि आन्तरिक तयारी भने सबैले तिव्र पारेको छन । यस हिसावले १३ औं महाधिवेशनको चुनावी खालमा संस्थापनबाट ३ जना र देउवा क्याम्पबाट देउवा मात्रै सभापतिका प्रत्याशी चयन भएका छन । सोझो अनुमान गर्ने हो भने मौजुदा परिस्थितिमा शेरबहादुरलाई शेर हुने सहज अवस्था देखिन्छ । संस्थापनका तीनै उम्मेद्धवार गुटगत हिसावले आआफ्नो टुकडी बलियो भएका र व्यक्तित्वका हिसावले सम्मानजनक मत ल्याउन सक्ने नेता हुन । तर सबै संस्थापन एक ठाम हुनुपर्ने युगिन आवश्यक्ताको ठीक विपरित उनीहरु विभक्त भएका कारण संस्थापनका कुनै पनि उम्मेद्धवारले सभापति जित्ने संभावना लगभग छैन । साथैको खतरा के हो भने वैधानिक व्यवस्था अनुसार ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसके कुनै पनि उम्मेद्धवारको जीत सुनिश्चित नहुने भएकोले देउवालाई संस्थापन पक्ष विभाजित हुदा पनि सहजै विजयको बाटो प्राप्त हुने संभावना कमजोर छ । यदि सभापतिका चारै प्रत्याशीले पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसके नीतिगत मुद्धालाई थाती राखेर नेतृत्व केन्द्रीत भएको महाधिवेशन पनि अनिर्णित हुने खतरा बढेको छ । यसो हुदा नेतृत्व चयनमा पनि महाधिवेशन असफल भएको सन्देश प्रवाह हुने मात्रै छैन, महाधिवेशनको अवधि लम्विने खतरा छ ।
नेता व्यवस्थापनको बखेडाले संस्थापनमा फुट
त्यसो त आखिरी घडीमा महाधिवेशनको बन्दसत्रका क्रममा कुनै चमत्कार भएर संस्थापनका ३ सभापति प्रत्याशी रामचन्द्र, सुजाता र सिटौलाले एकले अर्कोलाई समर्थन गरे भने कुरा बेग्लै हो अन्यथा संस्थापनले चुनाव हार्ने माहौंल स्वयं नेताहरुले बनाईरहेका छन । एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने जुंगे लडाईका कारण संस्थापन विभाजित ुन पुगेको हो । कुनै हालतमा सभापति नलडी नछा्डने पौडेलको अड्डीले गिरीजापुत्री सुजाता वा महामन्त्री सिटौलालाई पदीय रुपमा व्यवस्थापनमा सम्मानजनक स्थान मिलेन। त्यसैले उनीहरु द्युवैले पौडेलको झोली नबोकेर आफैं चुनावी खालमा दाउन हान्ने कोशीस गरेका छन । आफूलाई संस्थापनको र खासगरी कोईरालान परिवारको असली उत्तराधिकारी दावी गर्ने पौडेलले भोली चुनावी दौड जिते पनि हारे पनि संस्थापनलाई मिलाउन नसकेर पहिलो पराजय प्रश्तुत गरिसकेका छन । आफ्नो समूहलाई नै मिलाउन नसक्नेले भोलिका दिनमा देउवा समूहलाई पनि मिलाएर जान्छन भन्ने कुरामा कम्तिमा अब अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले भर नगर्लान । यसका अलवा लौह पुरुष गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह र युवा नेता गगन थापा, कुल बहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्काहरुलाई पनि मिलाउन फेल भएर पौडेलले सबैको नेता हुने अवसर मात्रै गुमाएन्न, समन्वयकारी नेतृत्व क्षमताको अयोग्यता पनि प्रमाणित गरे । आफ्नो समूहको घोषणामा देखिएको विलम्व पनि पौडेलको कमजोर निर्णय क्षमताको द्योतक हो । संस्थापनमा जननायक विपीपुत्र भद्र नेता शशांक कोईराला बाहेक अरुलाई महत्वका साथ पदीय व्यवस्थापनमा चुक्नु नै रामचन्द्रको बनवास जाने कारक र कारण देखिएको छ ।
को कसका उम्मेद्धवार ? वाध्यता वा रहर ?
यदि यही गठजोड अनुसार पनलवाईज चुनाव भयो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मतदान गर्न निकै पेचिलो अवस्था रहने छ । को कस्का उम्मेद्धवार र कस्लाई मतदान गर्ने भन्नेमा प्रतिनिधिहरुलाई निकै कठीन अवस्था सृजना हुनेछ । देउवा बाहेक अरुले सुरुदेखि नै आफ्नो समूहलाई एकतावद्ध राख्न सकेन्न । यदि संस्थापनले पौडेल र शशांक कोईराला प्यानललाई आधिकारीक भन्ने हो भने सुजाता र सिटौला पनि उत्तिकै सुकिला र प्रभावशाली संस्थापन हुन । गिरीजापुत्री सुजातालाई ६५ बर्षे कांग्रेस ईतिहासमै पहिलो महिला सभापति हुने रहर नै होला । यदि सुजाताले कथं जितिन भने महिला सभापति भएको कांग्रेसमा नयां ईतिहास कोरिने छ । उनी कसैकी डमी उम्मेद्धवार भन्दा पनि आफ्नै लहडमा चुनाव लड्न लागेकी हुन । उनले आफूले १२ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको पदत्याग गरेकोले अब सधै आफू त्यागी बन्न नसक्ने स्पष्ट पारिन । उनले शशांक र शेखर जस्ता प्रभावशाली परिवारजनको समर्थन रहेको दावी गरे पनि उम्मेद्धवारी घोषणामा उनीहरुलाई दायांबायां राख्न सकिन्न । यसअर्थमा उनी कोईराला वंशकी असली उम्मेद्धवार हुन हैन्न अब महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै टुंगो लगाईदिनुपर्ने भएको छ ।
पौडेल संस्थापनका भन्दा पनि अघोषित पौडेल गुटका मात्रै सभापति हुने परिदृश्यले देखाउदैछ । उनले संस्थापनका कसैलाई पनि समेट्न नसक्नुले उनी पनि दावी गर्ने तहमा मात्रै कोईराला वंशका उत्तराधिकारी उम्मेद्धवार बनेका छन । गिरीजासंगको गहिरो संवन्धका कारण सिटौलाले पनि आफूलाई नै उत्तराधिकारीको दावी नगर्ने कुरै भएन तर उनी पनि समूहकै प्रतिनिधित्व गर्न भने चुकेका छन । यसरी हेर्दा पदीय व्यवस्थापनको खडेरी नै संस्थापनको कमजोरीको रुपमा देखिएको छ ।
महाधिवेशन कांग्रेसको भए पनि यो चासो हो देशी विदेशी सबैको, खासगरी दक्षिण छिमेकी भारतको, भारत मध्ये पनि रअको । यसमानेमा रअले कुनै चमत्कार गरेर सिटौलाहरुलाई थुम्थुमाउन सक्यो भने वा सुजातालाई सही व्यवस्थापन गरयो भने चाहिं संस्थापन फुट र गुटका पनि एकजुट हुन सक्ला की ? तर समय धेरै घर्की सकेकोले त्यो चमत्कार हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला । संस्थापनको तीनगुट देउवालाई चिठ्ठा सावित भो भने पनि त्यो आश्चर्य नहोला । तर खै के होला रमिते भन्दा प्रतिनिधिहरुकै हातमा जो छ निर्णय ।
(स्रोत : नेपालपाटी डटकमबाट)